“Ma nihin koox u nugul in laga badiyo kulanka Liverpool” – Rashford oo ka hadlay ciyaarta ka dhici doonta Anfield – Gool FM
(Manchester) 15 Dis 2018. Weeraryahanka kooxda Manchester United Marcus Rashford ayaa xaqiijiyay in Red Devils aysan ahayn kooxda laga awood badan yahay, kahor kulanka Derby of England ay la ciyaari doonaan kooxda Liverpool.
Manchester United ayaa farqi weyn u jirta dhanka kala sareynta hogaamiyaasha horyaalka Premier League ee Liverpool, waxaana farqiga dhibcaha u dhaxeeya haatan uu gaarsiisan yahay ilaa iyo 16 dhibcood.
Hadaba Marcus Rashford ayaa kahor kulankan u sheegay saxaafada: “Ma aadi doono halkaas inagoo koox daciif ah, waxaan qabaa in kulankan aan ku soo gali doono inaan guuleysano sida ciyaar kasta ee kale”.
“Xaqiiqdii waa koox fiican, xawaaraha ay ku ciyaarayaan ayaa xaalada ka dhigeysa mid adag, laakiin waa inaan la qaadanaa xawaarahan isla markaana aan isku daynaa inaan hormar sameyno”.
“Waa inaan diirada saarnaa ciyaarta, sababtoo ah waxaan awoodnaa inaan dhaawacno isa markaana aan goolal ka dhalino”.
“Waxaan u maleynayaa in xaaladuhu ay kala duwan yihiin kahor ciyaartan, dabcan, waxay heystaan wax iyaga u gaar ah, anaguna waxaan nahay shakhsiyaad aan marna la qarin Karin”.
“Waad ogtihiin in tababare Mourinho uu jecel yahay inuu badiyo, sidaasi darteed kahor kulankan, waa arinta kaliya uu haatan ka fikirayo, ugu danbeyntii, taasi waa waxa ugu muhiimsan”.
Manchester City oo si Kumeel gaara ugu soo Laabatay hogaanka horyaalka Kaddib Markii...+SAWIRRO